mmuta | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Ekwentị mkpanaaka mmefu ego Nokia 2.3 nwetara nnwere onwe ruo ụbọchị 2
Ihe na 09.12.2019 09.12.2019
HMD Global ekwupụtala ekwentị mmefu ego ọhụrụ na Egypt. Ọ bụ ezie na ọtụtụ na-atụ anya mmalite nke Nokia 8.2, n'ezie ihe omume ahụ bu n'uche ịmalite Nokia 2.3. Nke a bụ ihe ntinye ọkwa dị larịị ...
Okwu metụtara agha azụmaahịa dị n'etiti China na United States, ebe Huawei nọ n'etiti etiti arụmụka a, nwere oge ụfọdụ na-atọ ụtọ. Russia kpebiri na ndị China ga-abụ onye na-eweta akụrụngwa 5G. Na Russia…
Sunnism bu otu uzo isi nke Islam. Sunnism: nkọwa, atụmatụ na eziokwu na-atọ ụtọ
Ihe na 15.09.2019 02.10.2019
Ikekwe ọ dịghị okpukpe dị n'akụkọ ihe mere eme ya nke hapụrụ mgbagha nke mere ka e hiwe usoro ọhụrụ n'ime otu nkuzi. Islam isighi iche: enwere ugbua okara iri abuo nke isi ya ...
Ochie Kwere Ochie: atụmatụ
Ihe na 15.09.2019 03.10.2019
Okpukpe Okwukwe Ochie Old Old kweere nwere ụdị dịtụ na nke anọ anọ na aka, nke juputara n’oge anyị. O nwere obebe uzo abuo na uzo iri-iteghete, ebe obehu di elu putara plate n’elu Christ…
Buddhism: ezumike, ọdịnala, omenala
Ihe na 15.09.2019 16.11.2019
Akụkọ ihe mere eme Buddha nwere ogologo oge, yana ọtụtụ ndị na-eso ụzọ ruo oge a. Mmalite nke okpukperechi a nwere akụkọ ihunanya nke ya, nke a ga-akọwa n'isiokwu a. Ọzọkwa na ...
Ihe ikpere na akara ngosi nke Onye isi ndi Michael
A pụrụ ịhụ ihe oyiyi nke Onye Nnukwu Onye isi mmụọ ozi Michael na nnukwu amụma, n'obere ụlọ ụka ndị dị n'ógbè na n'ụlọ ndị kwere ekwe. Gini mere dike nke akwukwo nso ji nwee ihunanya na nsopuru a n’etiti ndi Kristian? Onye bu onye? Dika…
Icelandic na-agba nke usoro ọcha na oji
Ihe na 15.09.2019 04.10.2019
Ndị na-agba ọsọ Icelandic bụ akara eji eme ihe maka anwansi, na mgbe ụfọdụ n'ụdị egbugbu. E kewara ha n’ụdị abụọ: ahiri na ọcha na nke ojii. Ọ dị mfe ịkọ na ọcha bụ…
Ọrụ nke obodo. Nkewa obodo site n’omume: ihe nlere
Ihe na 15.09.2019 18.10.2019
Obodo adaghị onwe ya elu. Site n'oge ọmụmụ ya, a na-ejikọ ya n'ụzọ ọ bụla na ụdị ọrụ ọ bụla, nke bụ ọrụ ya. Eziokwu site n'oge gara aga Akụkọ ihe mere eme nke narị afọ gara aga nke ihe a kpọrọ mmadụ na-agba akaebe na ...
Chukwu Amon - Dinwenu Egypt
Ihe na 15.09.2019 28.09.2019
Ọ bụ chi ndị Ijipt oge ochie na-adịghị ahụkebe. A asughariri aha ya dika “ihe zoro ezo” ma obu “ihe nzuzo” ma rue mgbe anwu anwu, nke dikwasiri ya, n’enwu isi ndi n’adiri ya nma. Ya ...
Socionics bụ ... Socionics: tebụl mmekọrịta
Ihe na 15.09.2019 16.10.2019
Ogologo oge gara aga enwere okwu dị ka socionics. Nke a abụghị sayensị, mana nhazi ọpụrụiche nke ụdị mmadụ, yana mmekọrịta ndị na-etolite n'etiti ha. E hiwere ya na iri-asaa nke narị afọ gara aga…
Etu esi eme ka iwepu mkpesa?
Ọ bụrụ na ndị otu ahụ ejighi afọ ojuju na mkpebi ụlọ ikpe mbụ, ọ nwere ikike itinye akwụkwọ mkpesa. N'aka nke ya, onye na-agbachitere iji gosipụta ikike ha, ọ dị mkpa ịdọrọ ma tinye akwụkwọ mkpesa ...
Ezigbo ịhụnanya na-akọ. Njikọ runes na ihe ha pụtara, mmetụta nke ọmarịcha ịhụnanya
Ihe na 15.09.2019 05.12.2019
Ime anwansi na-arụ ọrụ dị mkpa nke ndụ mmadụ mgbe niile, nyere ya aka n'ọnọdụ siri ike ma bụrụ onye a pụrụ ịdabere na nkwado. Ndị nna nna anyị chigharịkwuru ike dị elu maka enyemaka, ma ruo taa wee lanarị ...
Interkọwa nrọ: ihe mmụọ ozi na - agụ nrọ. Ihe o rutara na nrọ
Ihe na 15.09.2019 05.10.2019
Gịnị mere mmụọ ozi ahụ ji rọọ nrọ? Onyinyo a na-egbuke egbuke nke ozi oziigwe nwere mmetụta dị jụụ n'ahụ ndị mmadụ. Hụ ọmarịcha cherị na nrọ, ha teta n'ụra, zuru ike. Agbanyeghị, gịnị ka nrọ abalị na-ekwe nkwa…
Kedu ihe aha Dmitry pụtara maka nwatakịrị, mmetụta ya na ọdịmma mmadụ
Ihe na 15.09.2019 07.10.2019
Enwere echiche na ọdịnihu mmadụ na-emetụta ọ bụghị site na ụbọchị a mụrụ ya, kamakwa akara zodiac n'okpuru amụrụ ya, yana aha nke aha ya. Ihe a niile na ...
Uche nke uche - nkowa, atụmatụ na ihe na-atọ ụtọ
N’isiokwu a, anyị ga-achọpụta ihe echiche nke uche (ụwa echiche) nọchiri anya ya. Na nkuzi esoteric (anwansi) (afọ ọhụụ, theosophy, hermeticism) a na-akpọ ya olu (oyibo) nke okike (uwa niile), esite na echiche, echiche na echiche ...
Kedu ihe afọ 1970 ga-ekwu maka ya? Olee anụmanụ ọ nọchiri anya ya na agụ ihe ọwụwa anyanwụ?
Ihe na 15.09.2019 09.01.2020
Iji mara onwe gị nke ọma, mmadụ nwere ike ichigharịkwute ebe dị iche iche. Otu n'ime ha bụ akwụkwọ nyocha China, nke nwere ike ịkọ ọtụtụ ihe gbasara mmadụ. Isiokwu a ga-aba uru maka ndị…
Mpaghara obodo bụ ... Obodo ndị dị na Moscow. Onye isi obodo
Ike ọchịchị obodo bụ ụdị pụrụ iche nke gọọmentị. Ha esighi na ndị ọchịchị obodo, agbanyeghị na a na-akpọ ha ka ha rụọ ọrụ nke ọma nke ụmụ amaala. Gịnị bụ obodo? Obodo bụ ezigbo akwụkwọ ndekọ ...
Otu esi ede edemede na eserese "Again deuce"
Ihe na 15.09.2019 20.11.2019
Eserese "Abụọ Ọzọ" bụ usoro nke akụkọ ọdịmma onye kwuo uche ya. Ọ bụ otu n'ime ọrụ ndị kacha ewu ewu na eserese Soviet. Ugbu a ọ nọ na osisi Tretyakov. Onye omenkà zụlitere nsogbu nke ma ụmụaka ma ndị okenye, ...
Akara nke ịdị n'otu bụ isi nke ịdị mma. Akara nke mba na mba niile nke nkwekọ, akara PCT
A na - akpọ ọha mmadụ ọgbara ọhụụ. Ugbu a nnukwu ngwaahịa dị iche iche etolitewo karịa ka ọ dị ugbu a. N'etiti ọnụ ọgụgụ dị otú ahụ dị ukwuu na ndị nrụpụta dị iche iche, ọ dị mfe maka onye ahịa ya furu efu ma ọ na-esiri ya ike ịme nhọrọ ziri ezi ...
Nnukwu mmiri Vasyugan
Ihe na 15.09.2019 30.11.2019
Vasyugan swamps bụ ndị kasị ibu n'ụwa. Ha di na etiti etiti mpaghara Federal Siberian, otu ebe di n'etiti osimiri Irtysh na Ob. Imirikiti ebe obibi a dị na mpaghara Tomsk, ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 3,888.